«Rallye Tour de Tana» : hahemotra amin’ny volana desambra | NewsMada
«Rallye Tour de Tana» : hahemotra amin’ny volana desambra
Notapahin’ny federasiona Sport automobile malagasy (FSAM) sy ny klioba Asa Tana, fa hahemotra amin’ny fiandohan’ny volana desambra, izany hoe : ny 1 sy 2 ary ny 3 desambra ho avy izao, ny dingana fahadimy amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara, amin’ny familiana fiarakodia «Rallye Tour de Tana».
Tokony notanterahina ny 6 ka hatramin’ny 8 oktobra, lasa teo ity fifaninanana ity saingy noho ny didi-mpanjakana navoakan’ny minisitera, manafoana ny fihaonana ara-panatanjahantena rehetra dia nandray fanapahan-kevitra ny Asa Tana, mpikarakara ity rallye ity, fa hatsahatra ny fifaninanana.
Tsy hiova kosa ny halaviran’ity rallye ity, izay mirefy 415, 90 km ary misy dingana manokana «ES» miisa 12, mahatratra 142, 60 km. Mijanona ho lanjan’isa 2, ihany koa izany. Tsy hisy fanampiny ihany koa ny isan’ny mpifaninana, fa mijanona ho 28 hatrany. Araka ny fantatra, tsy hisy intsony kosa ny «reconnaissance » na fizahana ny lalana, ho an’ireo mpifaninana.